Musiyano uripo pakati pedigital piano uye tsika
Kuenzanisa neyakajairika piyano, dhijitari piano haina kunetsa, zvese zvaunoda kuti uite plugging-in; kukununura kubva kurongedza piano. Uye imwe inotakurika modhi yedhijitari piano inogona kutakurwa chero nguva. Izvi zvakakwana kune vechidiki vanofarira piyano, asi vanofanirwa kufamba kazhinji, kana kutotamira kune rimwe guta! Basa nehupenyu zvatove zvakabatikana, muchirongwa chakamanikana, iwe zvakare unotarisira kusvina nguva shoma yekuridza piyano, kugutsa yako shoma kufarira. Kunyangwe akashanda nguva yakawandisa kusvika kumba kwehusiku kwehusiku, nekushaya hope; zvirokwazvo unoda kutamba kupfuura maminetsi mashoma. Dhijitari piano inogona kuiswa yakananga mumahedhifoni, isingavhiringidze vamwe vanhu iri mukana usingadzoreke. Uye izvi zvese ndechimwe chinhu icho chinyakare piyano isingambokupa iwe.
Kunze kweizvozvo, piano yedhijitari iri kunakidza. Zvisiye wega matoni akasiyana, reverb, kunyora zvakananga izvi zvese. iyo piano yedhijitari inogona kutariswa seye keyboard yekuisa mudziyo. Chivhariso USB kuti kombiyuta uye kushandisa Software akafanana Ivory American D, uye Piano; Tinoziva kuti munguva yeBach, pakanga pasina piano yazvino, uye munhu wese aishandisa harpsichord. Nekudaro, iwe unogona kuyedza kuridza hunhu hwakaenzana nemhando yekurira yeharpsichord, uye kunyangwe iyo keyboard ichinzwa sepiyano yazvino, iri padyo padyo neBach pane iyo yekushandisa yechinyakare piyano. Rudzi urwu rwekunakidzwa ndechimwe chinhu icho chinyakare piyano isingatombo kupa. Dhijitari piano inogona kuitwa kuti iwedzere kusarudza. Yakaderera mutengo, hapana chikonzero chekugadzirisa, hapana chekugadzirisa.
Asi, panogara paine asi. Dhijitari piano haigone kukupa iwe mhando yekusanganiswa kwakakwana kweindasitiri neunyanzvi, iyo yakachena uye yakachena pfungwa yemimhanzi senge yechinyakare piyano. Sezvakangoita mubhuku raJohn berg, Iyo Nzira Yekutarisa, kunyangwe tiine uyu mufananidzo wepamusoro-soro paInternet, isu tichiri kutenga tikiti yendege kuParis kuti tione yekutanga Mona Lisa. Nekuti tinoziva, icho ichokwadi, izvo zvatinoona pachiratidziri, kunyangwe tikakwanisa kuswededza mukati, tichiona zvese zvakadzama, isu tichiri kufunga kuti icho hachisi chokwadi. Vanhu vane pfungwa, asi zvakare havana musoro, ini ndinoda piano yedhijitari, nekuti inondipa kunakidzwa, iri nyore kutaura kupfuura piyano yechinyakare. Asi ini ndinosuwa piyano yechinyakare panguva imwe chete, nekuti ndinoziva, ndiwo maratidziro akanaka, uye mutinhimira unonzwika — - kunyangwe uchizoda kugadzirwazve.
Magetsi Akarurama Piyano, Magetsi Grand Piano, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Smart Piano Khibhodi, Dhijitari Piano Kugadzirisa,